एमाले नेता मेटमणी भन्छन्– वैद्यले माफी माग्नुभयो, मचाहिँ माग्दिनँ | Ratopati
बागमती प्रदेशका काँग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरुद्ध नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिए । शुक्रबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा उनले सो अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तापक्ष मात्र नभई उनकै दलले कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाउँदै आत्मालोचना गर्न निर्देशन दियो । बैद्यले प्रदेशसभाको बैठकमा माफी मागिसकेका छन् ।
गम्भीर प्रकारको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका वैद्यले शनिबारको प्रदेश सभाको बैठकमा आफूले भावावेगमा आएर सो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पार्टीको निर्देशनअनुसार आफ्नो भनाई फिर्ता लिएको बताउँदै संसदको रकर्डबाट समेत सो भनाइ हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
तर, उनै वैद्यको शुक्रबारको भनाइलाई एमालेकै निवर्तमान सांसद मेटमणि चौधरीले भने समर्थन गरेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो भनाई लेख्दै उनले वैद्यको भनाइको समर्थन गर्दै उनको अभिव्यक्ति सबैलाई अप्रिय लागे पनि सत्य रहेको दावी गरे ।
चौधरीले बैद्यलाई सो अभिव्यक्तिका लागि धन्यवाद मात्र दिएका छैनन्, त्यसबारेमा माफी माग्न पनि आवश्यक नभएको बताएका छन् ।​ मेटमणि चौधरी दाङ क्षेत्र नंबर १ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद हुन् । बैद्यको अभिब्यक्तिको समर्थन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चौधरीको आलोचना भइरहेको छ ।
शनिवार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा एमाले नेता चौधरीले बैद्यले माफी मागे पनि उनले दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै आफू माथि कारवाही गर्न आए कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए ।
सुनौं एमाले नेता चौधरीका कुरा–
तपाई एमाले नेता भएर पनि कांग्रेस प्रदेश सांसद नरोत्तम बैद्यले दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई किन समर्थन गर्नुभएको ?
मैले जे हो, त्यही भनेको हुँ ।
समाजिक सञ्जालमा तपाईको आलोचनालाई भइरहेको छ, हेर्नुभएको छ ?
मलाई यस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने अनुमान त थियो । तर, पनि किन भनियो भने खासगरी हाम्रै कारणले धेरै पटक प्रतिनिधि सभा भंग ग-यौँ । ब्यवस्था ध्वस्त गर्ने काममा हामी आफैं लागिरहेका छौँ । संविधान धुजा धुजा बनाउने काममा हामी आफैं लागिरहेका छौँ । अध्यादेशमाथि अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
यतिमात्रै हैन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति सारा दुनियाँको वितृष्णा जाग्ने कामको भूमिका खेलिरहेका छौँ । जुन किसिमले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्योचाहिँ गरेकै छैनौँ । खाली भ्रष्टाचार र बेतिथिका प्रत्येक दिन तपाईहरु नै समाचार लेखिरहनुभएको छ । भनेपछि, यसले देशलाई कुन ठाउँमा पु&yen;याउँदैछ ? यस्तो अवस्थामा मुलुकका जनताहरु पुगिसकेका छन् कि नेताहरु सबै मरेहुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आज त्यो मनोविज्ञानमा नेपाली जनता पुगेको बेला नरोत्तमजीले रोष्टमबाट बोलिदिएको मात्रै न हो । मलाई पनि लागिरहेको छ, मैले पनि लेखिदिँए ।
नरोत्तम बैद्य उहाँ जनजातिको छोरा भएका कारणले जे हो, त्यो बोलिदिन्छन्, यसको रिजल्ट भोलि के आउँछ, कति दोष खप्नुपर्छ कति भारी खप्नुपर्छ, त्यसको मतलव राख्दैनौँ । जे सत्य हो त्यो बोलिदिन्छन् । मैले पनि सत्य तथ्य कुरा बोलिदिनुपर्छ भनेर मात्र बोलिदिएको हो, अरु केही हैन ।
तर, वैद्यले त आज प्रदेश सभाको बैठकमा मैले आवेशमा आएर बोलेँ भनेर माफी मागिसक्नुभएको छ । अब उहाँलाई समर्थन गरेको तपाईले पनि माफी माग्नुहुन्छ कि हुन्न ?
उहाँले आवेशमा आएर माफी माग्नु भन्दा पनि उहाँ त्यो ठाउँमा अडिनुपर्छ । किनकि उहाँले बोलेको कुरा सत्य हो । नेपाली जनताका भावनाहरु अभिव्यक्त गर्नुभएको छ । कांग्रेसको दबावबाट माफी माग्नुहोला, त्यो ठीक छ । प्रेसर धान्न नसकेर माफी माग्नुहोला । तर, सत्य कुराचाँहि सत्य नै हुन्छ । केही दिन सत्य छोपिएला, तर तपाई हेर्दै जानुहोला, यसको उजागर हुन्छ ।
व्यक्ति हत्या गर्छु भन्ने अभिप्रायको यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको त फौजदारी कसुर अन्र्तगतको कुरा हैन र ?
उहाँले केपी ओलीकै नाम लिनुभयो, त्यो बेठीक भयो । तर, नेपाली समाजको मनोविज्ञान यस्तो छ भन्दा हुन्थ्यो । उहाँको अलि जिब्रो चिप्लिएको हो, जस्तो लाग्छ । तर, मनोविज्ञान चाहीँ यो छ ।
तपाईले नै यस्तो अभिव्यक्तिको समर्थन गर्नुभएको छ । आफूमाथि पनि कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नुभएको छ कि छैन ?
कारवाही त के हुन्छ र कारवाही । उहाँले भनेका कुरा ठीक भनेको छु । त्योभन्दा मुनि मैले भनेका कुरा पनि हेर्नुस् न । हामीले आफूलाई सच्याउँनुप-यो नि गाली गर्नुभन्दा ।
अरुले के भन्यो भन्दा म ठीक छु कि छैन ? त्यति ठूलो विशाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर निरीह ठाउँमा पु¥याउने शासकहरुको पनि कमजोरी होला नि । त्यत्रो जनताले भोट हालेको प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने भन्ने कुरा सुहाउँछ त ? मिल्छ यो गर्न ? संविधान धुजा धुजा पार्न मिल्छ ? त्यत्रो परिश्रम गरेर ल्याएको, त्यत्रो मिहिनेत गरेको ल्याएको प्रणालीलाई समाप्त गर्न मिल्छ ? यी सबै चिज नदेख्ने अनि एउटा प्रदेश सांसदले बोलेका कुरालाई ठूलो इश्यू बनाउने कुरा त मिल्दै मिल्दैन नि ।
यसको मतलब, नरोत्तम वैद्यले भनेको कुरालाई गरेको समर्थन तपाई फिर्ता लिन चाहनुहुन्न ?
उहाँले भनेको कुरा एकदम ठीक छ । बिल्कुल ठीक छ । नेपाली जनताको मनोविज्ञान हो । म त भन्छु यसमा उहाँले माफी माग्नुहुँदैन । क्षमायाचना पनि गर्नुहुँदैन । म त आफूले भनेको कुरा जीवनमा फिर्ता लिन्न बरु सबै कुरा त्याग्न तयार छु । पछाडि फर्कने त मेरो बानी नै छैन । धेरै सोचेर कदम चाल्छु । नियतबस गल्ती कुरा मेरो जीवनमा गर्दिनँ । अञ्जानमा गरेको गल्ती क्षमायाचना हुन सक्छ । तर, मेरो ब्रह्मले देखेको, ज्ञानले देखेको, मेरो विवेकले देखेको सत्य कुरा म कहिले कसैसँग माफी माग्दिनँ ।
प्रधानमन्त्री विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई तपाईले समर्थन गर्नुभएको छ । भोलि तपाईलाई सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी ग-यो भने कारवाहीका लागि तयार हुनुहुन्छ त ?
तयार छु नि । के कुरा, पुर्जी न सुर्जी । पूरै तयार छु । सबै कुराको सामना गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत गरेर नै मैले लेखेको हुँ । आवेगमा आएर लेखेको छैन । सत्य कुरा गर्दा पनि मेरो यति धेरै चर्चा हुन्छ भने अझै राम्रो काम गर्दा कति चर्चा होला । यो त सामान्य कुरा न हो ।